UMaria Goeppert-iMeya, iMathematika kunye neFizikiki
I-20 yeXesha leMathematika kunye neFizikiki
UMaria Goeppert-Iingoma zamagama:
Eyaziwa ngokuba: I- mathmatician and physicist , uMeya Goeppert uMeya wanikezwa umvuzo weNobel kwiFizikiki ngo-1963 ngenxa yomsebenzi wakhe kwi-shell ye nyukliya.
Umsebenzi: i- mathematician, physicist
Imihla: Juni 18, 1906 - Februwari 20, 1972
Yaziwa nangokuthi: uMary Goeppert uMeya, uMaria Göppert Mayer, uMaria Göppert
UMaria Goeppert-Mayer Biography:
UMaria Göppert wazalelwa ngo-1906 eKattowitz, ngoko eJamani (ngoku eyiKatyow, ePoland).
Uyise waba nguprofesa wezonyango kwiYunivesithi yaseGöttingen, kwaye unina wayengumfundisi wezomculo owayengumfundi owaziwayo ngamalungu akhe okuzonwabisa.
Ngenkxaso yabazali bakhe, uMaria Göppert wafunda imathematika kunye nesayensi, elungiselela i-yu vesiti. Kodwa akukho zikolo zikarhulumente zamantombazana ezazilungiselela lo msebenzi, ngoko wabhalisa kwisikolo sabucala. Ukuphazamiseka kweMfazwe Yehlabathi I kunye neminyaka emva emva kwemfazwe kwenza uvavanyo lunzima kwaye luvale isikolo sabucala. Unyaka omfutshane wokugqiba, uGöppert wada wadlulisa iimviwo zakhe zangena waza wangena ngo-1924. Owesifazane ofundisa kuphela eyunivesithi wenza njalo ngaphandle kwemvuzo - imeko apho uGöppert wayeya kuba yinto eyaziwayo kwi-career yakhe.
Waqala ngokufunda iimathematika, kodwa umoya ovuthayo njengesiko esitsha seemathematika ze-quantum, kunye nokuvezwa kweengcamango ezinjenge- Niels Bohrs kunye no-Max Born, kwakhokelela uGöppert ukuba atshintshele kwi-physics njengekhosi yakhe ekufundeni.
Waqhubeka nokufundisisa kwakhe, nangokufa kukayise, waza wamkela udokotela ngo-1930.
Umtshato kunye nokufudukela kwamanye amazwe
Unina wayethathe iibhodi zabafundi ukuze iintsapho zihlale ekhaya, kwaye uMaria wasondela kuJoseph E. Mayer, umfundi waseMerika. Batshata ngo-1930, wathatha igama lokugqibela elithi Goeppert-Mayer, waza wabuyela eUnited States.
Kulapho, uJoe wathatha isigqibo kwi-faculty yaseYunivesithi yaseYohn Hopkins eBaltimore, eMaryland. Ngenxa yemithetho yokuziphatha, uMaria Goeppert-Mayer wayengakwazanga ukugcina isikhundla esikhokhelwayo kwiYunivesithi, kwaye endaweni yoko waba ngumhlobo wokuzithandela. Kule ndawo, unokwenza uphando, wathola inani elincinci lokuhlawula, kwaye wanikwa i-ofisi encinci. Wadibana kunye nobudlelwane noEdward Teller, obesebenza naye kamva. Ngexesha lobushushu, wabuyela eGöttingen apho wadibanisana noMax Born, owayengumcebisi wakhe wangaphambili.
Uzalwe washiya eJamani njengoko olo hlanga lulungiselela imfazwe, kwaye uMaria Goeppert-Mayer waba ngummi wase-US ngo-1932. UMaria noJoe babenabantwana ababini, uMarianne noPetros. Kamva, uMarianne waba yinkwenkwezi yenkwenkwezi kwaye uPetros waba ngu-professor professor wezoqoqosho.
UJoe Mayer olandelayo wanikwa isigqibo kwi- University of Columbia . UGeeppert-Mayer kunye nomyeni wakhe babhala incwadi ndawonye apho, iStatistical Mechanics. Njengoko kuJohn Hopkins, wayengenakho ukufumana umsebenzi wokuhlawula e-Columbia, kodwa wasebenza ngokungaqhelekanga kwaye wanikeza ezinye iintetho. Wadibana no-Enrico Fermi, waza waba yingxenye yeqela lakhe lophando-engenawo umvuzo.
Xa iUnited States eya empini ngo-1941, uMaria Goeppert-Mayer watyunjwa ukuqeshwa okuhlawulwayo kuphela-ngexesha elilodwa kuphela, kwi- Sara Lawrence College .
Wabuye waqala ukusebenza ngexeshana kwiprojekthi ye-Columbia University ye-Substitute Alloy Metals-iphrojekthi efihlakeleyo ekusebenziseni ukwahlukana kwe-uranium-235 ukunika izixhobo ze-fission zenyukliya. Wahamba maxesha amaninzi kwiLebhu yaseLos Alamos eyimfihlo e-New Mexico, apho wasebenza noEdward Teller, uNiels Bohr no-Enrico Fermi.
Emva kwemfazwe, uJoseph Mayer wanikwa i-professorship kwiYunivesithi yaseChicago, apho ezinye iicycicist ezinkulu ezinkulu zasebenza. Kwakhona, kunye nemithetho yokuzikhethela, uMaria Goeppert-Mayer wayengasebenza njengoprofesa oncedisayo (ongenakuhlawulwa) ongenamvuzo - okwenziweyo, kunye no-Enrico Fermi, u-Edward Teller noHarold Urey, nabo belo xesha kwi-U. C.
Argonne kunye neentetho
Kwiinyanga ezimbalwa, iGeeppert-Mayer yanikelwa isikhundla kwiLebhu yeSizwe yaseLargonne, elawulwa yiYunivesithi yaseChicago.
Isikhundla sasiyinxalenye yesikhathi-mali kodwa sikhokhelwa kunye nokuqeshwa okwenene: njengomphandi ophezulu.
E-Argonne, uGeeppert-Mayer wasebenza noEdward Teller ukuba bahlakulele "ingcamango encinane" yemvelaphi ye-cosmic. Ukususela kuloo msebenzi, waqala ukusebenza kumbuzo wokuba kutheni izinto ezinama-2, 8, 20, 28, 50, 82 ne-126 kunye ne-126 neutron zizinzile. Imodeli ye-atom isele ikhangele ukuba ii-electron zijikeleza kwi "iigobols" ezijikeleza i-nucleus. UMaria Goeppert-uMeyili wenza isicwangciso semathematika ukuba xa iinqununu zenyukliya zijikeleza kwiingxube zabo kunye neengcambu ngaphakathi kwinqanaba kwiindlela ezingabonakaliyo ezinokuthi zichazwe njengeigobolondo, la manani ayeza kuba xa iigobolondo zizele-kwaye zizinzile ngaphezu kweigobolondo ezingenanto .
Omnye umphandi, uJHD Jensen waseJamani, wafumana isakhiwo esifanayo malunga nexesha elifanayo. Wavakashela uGeeppert-Mayer e-Chicago, kwaye ngaphezu kweminyaka emine la mabini avelisa incwadi kwisigqibo sawo, i- Elementary Theory ye-Nuclear Shell Structure, eyapapashwa ngo-1955.
Ngowe-1959, iYunivesithi yaseCalifornia eSan Diego yanikela ngezikhundla ezizeleyo kuJoseph Mayer noMaria Goeppert-Mayer. Bamkela baza baya eKalifornia. Kungekudala emva koko, uMaria Goeppert-Mayer wahlushwa isifo esiye sayeka ukukwazi ukusebenzisa ngokupheleleyo ingalo. Ezinye iingxaki zempilo, ingakumbi iingxaki zeentliziyo, zamkhathaza ngexesha lokuhlala kwakhe.
Ngo-1956, uMaria Goeppert-Mayer wakhethwa kwiSizwe seSizwe seSayensi. Ngowe-1963, uGeeppert-Mayer noJensen banikezwa umvuzo weNobel we-Physics kwi-shell yabo yesakhiwo se-nucleus.
U-Eugene uPaul Wigner naye waphumelela ngomsebenzi kwi-mechanum mechanics. UMaria Goeppert-uMeer wayengowesifazane wesibini ukuphumeza uMvuzo weNobel weFiziki (owokuqala nguMarie Curie), kwaye owokuqala ukuwunqoba kwi-physics ye-physics.
UMaria Goeppert-Mayer wafa ngowe-1972, emva kokuhlaselwa kwesifo senhliziyo ekupheleni kwe-1971 eyamshiya kwi-coma.
URobert G. Sachs. UMaria Goeppert-Mayer, 1906-1972: I-Biographical Memoir. 1979.
UMaria Goeppert-Mayer. Mechanics Statistical . 1940.
UMaria Goeppert-Mayer. Ingqungquthela Eyintloko yeNyukliya yeSakhiwo . 1955.
Amaphepha kaGoeppert-Mayer aseYunivesithi yaseCalifornia, eSan Diego.
Ukhethiweyo kaMeyi Goeppert uMeyile
• Kwangexesha elide ndiqwalasele iingcamango ezinzulu malunga ne-nucleus ye-atom ... kwaye ngokukhawuleza ndafumanisa inyaniso.
• Iimathematika zaqala ukubonakala zininzi kakhulu ukufana nokuxazulula i-puzzle. I-physics iyicala lokusombulula, kwakhona, kodwa iipuzzle ezenziwe ngokwemvelo, kungekhona ngengqondo yomntu.
• Ukufumana umvuzo weNobel kwiFizikiki, ngo-1963: Ukuwina umvuzo wawungekho mnqweno onokuzonwabisa njengoko wenza umsebenzi ngokwawo.
Imfazwe Yehlabathi II: I-Admiral Thomas C. Kincaid
Umtshato Ukukhusela uLucy Stone noHenry Blackwell
Iindawo ezintsha zeeGiological and Destinations
Imifanekiso yeHomer Simpson yeNtetho
Isitayela (i-rhetoric kunye nokwakhiwa)
I-Georgia-Round Round Redfish
Igama elithi '-nym': Isingeniso esifutshane kumazwi kunye namagama
Ubungakanani beselula kunye nomzekelo weMandla oNcedo lweNkxaso